UKhune ufuna ukulwela ijezi kwiChiefs - Ilanga News
Home Ezemidlalo UKhune ufuna ukulwela ijezi kwiChiefs
UKhune ufuna ukulwela ijezi kwiChiefs
Uzimisele nangokubuyisa isithunzi sakhe
UNOZINTI weKaizer Chiefs, u-Itumeleng Khune.
UNOZINTI oyisithandwa sabalandeli beKaizer Chiefs u-Itumeleng Khune uphumele obala ngokuthi uzimisele ngokuyilwela indawo yakhe aphinde abuyise nesithunzi sakhe kule kilabhu asebuye eqiwe yijezi kuyona.
UKhune ubeyingxenye yeBafana Bafana eqoqe amaphuzu awu-6 ihlula iphindelela iSao Tome and Principe eThekwini naseBhayi ngokwahlukana emidlalweni yokuhlungela i-Africa Cup of Nations (Afcon) ezokuba ngasekuqaleni kuka-2022 eCameroon.
IBafana iqale yashaya iSao Tome ngo-2-0 ngoLwesihlanu ebusuku eThekwini, yabuye yathela induku leli lizwe ngo-4-2 ngoMsombuluko ntambama eNelson Mandela Bay Stadium, eBhayi.
Lo nozinti akazange alithole ijezi kuyona yomibili le midlalo njengoba bekuvimbe uRonwen Williams. Ubehleli ebhentshini eThekwini kanti eBhayi ubesephavaliyoni.
Emuva komdlalo waseBhayi uKhune uveze ukuthi nakuba eqiwa yijezi nakwiChiefs muva nje, kodwa ukuqonda kahle ukuthi abaqeqeshi banendlela abasebenza ngayo.
Uthi okubalulekile kuyena wukuqhubeka nokusebenza kanzima ejimini. Uthi okumqinisa idolo wukuthi noMolefi Ntseki opheka iBafana usakhombisa ukukholelwa kuyena yize engadlali kwi-Chiefs. Uthi lokhu kusho lukhulu kuyena.
“Sekunesikhathi ngingalitholi ithuba lokubuyela kwiBafana (ngenxa yokulimala). Ngibonga odokotela abasebenze kanzima (ukuze ngilulame). Kumele ngiqale manje ukulelwa ukuthola ijezi ukugcina indawo kwiBafana.
“Konke okwenzekayo empilweni ngikuthatha ngendlela ekahle noma ngubani othola ijezi ngiyameseka. Phela onozinti engincintisana nabo bahle kakhulu kwi-Chiefs nakwiBafana,” kusho uKhune.
Uthi isikhathi esiningi akabheki ukuthi abalandeli bebhola bambona kanjani ngoba wazifundisa ukuhlala elwela ukuthi okubi akuphendule okuhle.
UKhune usegijime kwiBafana amahlandla awu-91 okwenza alandele u-Aaron “Mbazo” Mokoena ohamba phambili ngamahlandla awu-107. Emdlalweni olandelayo weBafana wokuhlungela i-Afcon izobhekana neGhana ekhaya bese ivala ngeSudan ekuhambeni. Le midlalo izokuba ngoNdasa (March).
* IChiefs izobhekana neLamontville Golden Arrows emdlalweni weDStv Premiership ozokuba ngoMgqibelo ngo-15h30 eSugar Ray Xulu Stadium, eClermont.
Previous articlei-DA ifuna aphendule uNgqongqoshe ngolukaBushiri
Next articleBadinwa eyokudedelwa kwesalukazi “esibulele”